Ngasiphi isikhathi kungcono kakhulu ukwenza ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka? Odokotela bahlinza kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa emva kwesikhathi. Kodwa nakhu isikhathi kungcono isiguli kanye nodokotela plastic?
Isiguli zinganikwa phakathi nokuhlinzwa kanye at 10 ekuseni no-18 ntambama. Kodwa kaningi ngaphezu emitholampilo kakhulu odokotela abahlinzayo plastic ekuseni linqume kokubonisana, kodwa msebenzi yayiswa ntambama kamuva.
Lokhu kuyaqondakala kusukela umbono emtholampilo - umsebenzi eyenziwa cishe ebusuku, sifushanise ngokuzenzakalela ukuhlala esibhedlela ukuze isiguli. eziqhutshwa Ngakho nesineke, kokuhamba izinzwa, babelele 8 amahora ngokuhambisana nesimiso evamile yansuku zonke, uvuka ekuseni, lidlule wokuhlola ejwayelekile futhi kusihlwa usungaya ekhaya. Ngaleyo ndlela ukukhulula kusihlwa embhedeni-indawo isiguli esilandelayo.
Yebo, odokotela abahlinzayo plastic kakhulu uyakuthanda echaza kamuva kwenziwe ukuhlinzwa, okuholela zinhlobo ezilandelayo agumenti: Bathi, nemisebenzi lesiguli nsuku musa ukuphazamisa, futhi ukulala ngobusuku obubodwa ukhululekile okuningi kakhulu kunalokho ntambama, futhi Hollywood Sekuyisikhathi eside ahlala lo mkhuba - ukusebenza ebusuku, i kula usuku. Ingabe ilungelo lokunquma Yiqiniso, kudingeka isiguli, ngemva kokuxoxa okulindele yakho ngegama lakho ohlinzayo plastic. Ngenxa rationality enkulu ekukhethweni kuka isikhathi ukuhlinzwa isikhumba kufanele kube.
Kodwa ohlinzayo plastic kufanele eluleke isiguli ukuthi kuyoba kangcono isiguli, bese kuphela ukwenza ukuhlinzelwa ubuhle.
Ngemva cishe noma yikuphi ukuhlinzwa nesineke plastic, the, osethathe umhlalaphansi, ukubulawa kwezinzwa okuvamile nje kudingeka imali ngosuku esibhedlela, futhi akukho muntu okufanele banelungelo hhayi ukuphuca. Nokho, ukuqamba amanga embhedeni wakhe amahora angaphezu kuka-24 ngeke abe wusizo. Kungase ngisho alimaze wena, ngoba umsebenzi ngokomzimba, ngisho njengoba injalo sakugcina kakhulu kuvimbela ukuthuthukiswa yezinkinga eziningi post-op, ezifana nokulimala eside absorbable, ukuvuvukala, uketshezi nokugcinwa emisipheni. Ngakho njengoba hhayi cool - futhi ngosuku esibhedlela, lena kokusungulwa okunengqondo kakhulu emitholampilo ukuhlinzwa plastic, ekusizeni ngangokunokwenzeka ukuze kusheshiswe umsebenzi wokutakula ngemva kokuhlinzwa futhi ukusiza ukubuyela ekuphileni okuvamile.
Vasoconstrictor ekhaleni lehla: zisebenzisa ngokuqapha
Impi amafilimu (USA): Top 10 fighters ezithakazelisayo American